ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ABSDF -ကျောင်းသားရဲဘော်-ဗဟိုကော်မတီဝင်ဟောင်း ရဲလင်းရဲ့ မြောက်ပိုင်း ခရီး(၇)
ABSDF -ကျောင်းသားရဲဘော်-ဗဟိုကော်မတီဝင်ဟောင်း ရဲလင်းရဲ့ မြောက်ပိုင်း ခရီး(၇)
by May Thingyan Hein on Friday, October 26, 2012 at 7:12am ·
အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ရန်ကုန်မြို့။
You, Nang Aung Htwe Kyi, ကိုဝိုင် ဝိုင်ကေ, Soe Lynn and 20 others like this.
ဘရာဇီး ငှက်ရိုး အလယ်လူ(အစိမ်းရောင်အကျီလက်တို၊ ပျောက်ကျား ဘောင်းဘီနှင့် )လှဆိုင်း http://www.facebook.com/photo.php?fbid=104581726362875&set=fp.100000197881048.100004331436934&type=1&theater
October 26, 2012 at 7:30am · Like · 1
Ko Lin Wai Aung Not ko maung gyi.Thay are u sein and ko tin maung aye.
October 26, 2012 at 10:11am · Unlike · 1
Zaw Lin >> ကျေးဇူးတင်တယ်..။ ပြီးမှ တစုတဝေးတည်းဖတ်ပါမယ်..။ ပြည်ပရောက် အေဘီ တွေ ( ဥပမာ..ကိုဌေးတင့်..တို့..ပေါ့ ။ သူ့ FB မှာ ဓါတ်ပုံတွေပါ..တွေ့မိတယ် ) ဆီက..သတင်းတွေလဲ..စုဆောင်းပါ။ အဓိက..က စာအုပ် ဖြစ်အောင်..လုပ်စေချင်ပါတယ်...။ ဒေါ်မေ..မှာလည်း..ဒီလို စဉ်းစားထားမယ်လို့ထင်ပါတယ်...။စာအုပ်ဖြစ်တယ်အထိ..လုပ်ပါဗျာ..။ ကျန်းမာ..ချမ်းသာ..ပါစေ.....
October 26, 2012 at 8:31pm · Like · 1
Nang Aung Htwe Kyi ကိုရဲ ကျေးဇူး ။
October 26, 2012 at 10:25pm · Like
Kyaw Soe Win စံမျိုးအောင်ကို မေးပေးပါဆိုလို့ အဲဒီနေ့က ဆေးခန်းထဲမှာပဲ ကျနော်ရယ်၊ ဇော်ဇော်မင်းရယ် မေးကြတယ်။ အဲလို မေးတဲ့အခြေအနေတွေမှ နာမည်တော့ မပြောချင်တော့ဘူး ဗဟိုကော်မတီဝင်ထဲကပဲ မူးပြီးတော့ ၀င်လာပြီးတော့ ရိုက်ကြတယ်၊ ဗဟိုကော်မတီဝင်တယောက်နဲ့ ရဲဘော်တယောက်ပေါ့ ၀င်ရိုက်ကြတာ..>> Please tell us all participants Ko Ye Lin. There should not be ANY EXCEPTION FOR NORTHERN MASSACRE.
October 26, 2012 at 10:42pm · Like · 3
Nang Aung Htwe Kyi အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းက အခြေအနေတွေက တအားရှုပ်ရှက်ခပ်နေတာ .. အဖမ်းခံလိုက်ရတာနဲ့ အဖမ်းခံရသူတွေကို မခံရသေးသူတွေက ထလရ တွေလို့ တထစ်ချယုံပြီး ဝင်လက်စွမ်းပြနေကြတာ။ကျမ အတွေ့အကြုံအရဆိုရင် ကျမကို ဖမ်းပြီးတာနဲ့ သန်းဇော် တို့ က ပြောကြတာက သူ့အကြောင်း ငါတို့ကအတိအကျရပြီးသား ။သေချာလို့ဖမ်းတာ ။ ဆိုတာတွေကို တခြားရဲဘော် တွေကို ရှင်းပြနေတာ ။ ကျမကို စစ်ကြောရေးတောင်မဝင်သေးဘူး ။ သူတို့ က ဒီလိုအပြောမျိုးတွေ အရင် တခြားရဲဘော်တွေကို နားရိုက်သွင်းထားတာ ။
October 26, 2012 at 10:53pm · Like · 2
Shwelatyar Daw ကိုထွန်းအောင်ကျော်....သူ့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ရင်းကလည်း အနုပညာသမား...။
October 26, 2012 at 11:39pm · Like · 1
October 27, 2012 at 1:52am via mobile · Like · 3
Kyawnaing Oo ကျန် သွား တယ် ထင် လို့ ပါ ကို ခင် မောင် စိုး ကို ဖမ်း တော့ ကျွန် တော့် ပါ ဖမ်း တယ် PSO တွေ ကိုဖမ်း ပြီး ပထမဆုံး ခါး ဖြတ် လိုက် တဲ့ သဘော ထင် ပါ တယ် အား နည်း တဲ့ ဗဟို ကော် မတီ ၂ ယောက် စ ဖမ်းပြီး သွေး တိုး စမ်း တယ်( အား နည်း တယ် ဆို တာ 88 နဲ့ အတူ ကျောင်း သား မဟုတ် ခြင်း ကို ဆို လို ပါ တယ်)နောက် PSO တွေ ဖြတ် တယ် ဒီ မှာ ကျွန် တော် နား လည် လိုက် ပါ ပြီ အကိုင်းချိုင် ပြီး အပင် လှဲ တော့ မယ် ဦး လေး စိန် နဲ့ တိုင် ပင် ပြီး ကို ထွန်း အောင်နဲ့ ညှိ တော့မှန် မှန် ကန် ကန် ၀န် ခံ ပြီး ဆွဲ ထည့် တဲ့ သူ တွေ ကော ဟုတ် တာ ရော မဟုတ် တာ ရော ၀န် ခံ ပြီး ရင်တာ ၀န် ထမ်း ဆောင် ချင် တဲ့ သူ ပြန် တာဝန် ပေး မယ် တာ ၀န် မထမ်း ဆောင် ချင် တော့ ရင် အိမ် ပြန် လွတ် မယ် လို့ သ ဘော တူ ညီ ချက် နဲ့ ဒေါင်း မိ ခင် ခန်း မမှာ တပ် မှုး တွေ လို့ စွံတ် စွဲ ခံ ရ တဲ့ဦး စိန် နဲ့ ကျွန် တော် တို့ ဖမ်း ဆီးခံ တွေ ပေါ် စကား ပြော တယ် ဒီ နေ ရာ ဟာ ကျောင်းသား တပ် မတော် ရဲ့ နောက် တန်း နေ ရဖြစ် ပေမဲ့ ထောက် လှမ်း ရေးတွေ ရဲ့ ရှေ့ တန်းစစ် မျက် နှာ ဖြစ် တယ် ဘယ် က လါ သည် ဖြစ် ငါ တို့ က တပ် မှုး တွေ ဖြစ် တယ် ငါတို့ အမိန့် ကို နာခံ ရ မယ် သုံ့ ပမ်း ပေါ် လဆီက တိုက် ပွဲ မှာ ဘဲ ကျင့် သုံး တယ် ထောက် လှမ်း ရေး အတွက် သုံ့ ပမ်း ပေါ် လဆီ မ ရှိ ဘူး ဒါ ကြောင့် ကျောင်း သား တပ် မ တော် သ ဘော ထား က ကျေး ဇူး တင် လေး စား ဖို့ ကောင်း တယ် ဒါ ကြောင့် မှန် မှန် ကန်ကန် ၀န် ခံ ကြ ပါ လို့ ဆို ပြီး ပြော တော့ အဖမ်း ခံ ရ သူ အား လုံး က နှီပ် စက် လွန်း လို့ မ ခံ နိုင် လို့ ၀န် ခံ ရ ပါ တယ် ဘယ် သူ့ တွေ တော့ အသား နာ လို့ ဆွဲ ထည့်မိ ပါ တယ် ၀န် ခံ ကြ တယ် အဲ ဒါ နဲ့ ဘဲ ထောက် လှမ်း ရေး လို့ ၀န် ခံ သူက ဦး စိန် နဲ့ ကျွန် တော် ဘဲ ကျန် တော့ တယ်ည ကျ တော့ အမှန် အတိုင်း ပြော ပါ တယ် ဆို တဲ့ ကျောင်း သား တွေ မဖြူ စင် ဘူး ဆို ပြီး ရိုက် လိုက် ကြ တာ မကဒတ (မပ) ရဲ့ ကမ္ဘာ ပျက် တဲ့ ည ပေါ့ ခင် ရွှေ လှိုင် ပြော သလို မငြင်း ဘူး ဆို လို့ ငြင်း ပယ် သူ တွေ ဘယ် လို ခံ စား လိုက် ရ တယ် ဆို ဒါ အား လုံး သိ မှာ ပါ
October 27, 2012 at 4:23am · Like · 3
Nang Aung Htwe Kyi ထလရ .. မဟုတ်လို့ မဟုတ်ကြောင်း အမှန်အတိုင်းပြောတော့ မင်းကဖြူစင် မှု့မရှိဘူးဆိုပြီး အသကုန်နှိပ်စက်တာကိုး ။လက်လွန်ခြေလွန် နှိပ်စက်တဲ့ဒဏ် တွေနဲ့ သေတာ ၁ဝ ကျော် ..။ငါ့ကိုအပြင်းအထန် နှိပ်စက်တဲ့ည ဆို မိုးလင်း ခါနီးအထိ ခံရတာ မြော့နေပြိ .. မျိုးဝင်းရော သံချောင်းပါ ရောက်လာပြီး မင်း ဒီလိုတင်းမခံပါနဲ့လေး .. သေသွားလိမ့်မယ်လေး.. နဲ့ သံချောင်း ပြောတာ ..။ စဉ်းစားကြည့် ..ဆက်ပြီးမသိဘူး ပြောနေ ရင် နောက်ထပ် ၁၅ မိနစ် ဆို ငါသေ ပြီ .. electric shock ပေးတာ တညလုံး ..ငါမခံနိုင်တော့ဘူး.. လက်တွေတောင်တုန်နေပြိ ။ ခံစားရတယ်။ ရင်နာတယ်။ ချရေးထားပေးတဲ့ နာမည်တွေ ဆိုင်းထိုးတာတောင် ဘောပင်တောင်မကိုင်နိုင်တော့တာကို .. မျိုးဝင်း ကငါ့လက်ကို ထိမ်းပြီး ဆိုင်းထိုးလိုက်ရတာ ..။
October 27, 2012 at 4:48am · Like · 5
Kotoe NB မီးစက်နဲ့shockပေးလိုက်တာမီးစက်ရပ်
October 27, 2012 at 5:13pm via mobile · Like · 3
Uthartun Ag ko ye lin
ko mpabu lot won chan yei lar. ..i intrest that
October 29, 2012 at 7:03am via mobile · Like
Nyunt Shwe ခင်ဗျားတို့အားလုံးဟာ အရေးကြီးတဲ့သမိုင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ကို ရေးနေကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဖတ်ရတာတွေက စိတ်မကောင်းစရာ ရင်နာစရာတွေနဲ့ မယုံနိုင်စရာတွေပဲဗျာ။ ဒီကောင်တွေဟာ နာဇီတွေ ကင်ပေတိုင်တွေတောင် ထိုင်ငိုရလောက်တဲ့ ခေတ်သစ် ဇီတိုင်တွေပဲ၊ ကျနော်တော့ သူတို့အားလုံးကို စက်တိုင်နဲ့သံတိုင်တွေ အုတ်နံရံတွေရဲ့နောက်မှာပဲ မြင်ချင်တယ်ဗျာ၊ ကြိုးစားကြပါ။
October 29, 2012 at 5:04pm · Like · 2
Aungmyint Ko ငရဲခန်းပြတိုက်တခုဖြစ်အောင်အထိ ကြိုးစားရမယ်။
November 2, 2012 at 9:43pm · Like · 2
Ko Lin Wai Aung ဦးသာထွန်းအောင် ဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာ မသိပေမယ့် မေးခွန်းကို ဖြေပါတယ်...ကျနော့်အနေနဲ့ ခရိုင်မှူးတာဝန်ရော ကော်မတီတာဝန်ရော ရှိနေပါတယ်...ကျနော်ဘယ်သူ့ကိုမှ ဖမ်းဘို့ အမိန့်ပေးခဲ့တာ...တိုင်ပင်ခဲ့တာ မရှိသလို ကိုယ်တိုင်လဲဖမ်းဆီးတာ မရှိခဲ့ပါ...ကျနော်စစ်ဆေးလို့ သေဆုံးခဲ့တာ ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်ခဲ့တာလဲ မရှိပါဘူး...ကျနော်ရေးတာ/ပြောတာတွေကို အစအဆုံးလဲစောင့်ဖတ်ပေးစေချင်ပါတယ်...ကိုယ်ကြုံတွေ့ခဲ့တာရယ်...အဲဒီ တုံးက ရှိခဲ့တဲ့ စိတ်အခံရယ်...ကော်မတီရဲ့အခြေအနေရယ်..တွေကိုထင်သာမြင် သာအောင်ရေးပါတယ်....တာဝန်ရှိခြင်းမရှိခြင်း/အပြစ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတာတွေကို ကျနော်မဆုံးဖြတ်ပါ...အဖြစ်အပျက်အမှန်တခုပေါ်လွင်အောင် ကိုယ်သိတာ မြင်တာ လုပ်ခဲ့တာ ကိုဘဲရေးပါတယ်...ပြောပါတယ်...အပြစ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းကို လူ့အဖွဲ့အစည်းကဘဲ ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်...ကျနော်ရေးထားတဲ့ ABSDF-NB ကျောင်းသားရဲဘော်ဟောင်းများနှင့် အဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်ရေးကြိုး ပမ်းနေကြသူများသို့...ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုလည်းဖတ်စေချင်ပါတယ်...
November 4, 2012 at 9:58pm · Like · 2
Nyunt Shwe Aungmyint Ko ခင်ဗျာ့းစိတ်ကူး အင်မတန်ကောင်းတယ်၊ ကျနော် ရာနှုန်းပြည့်ထောက်ခံတယ်။ ဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ်။ ဟီရိုးရှီးမား ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းခြံထဲက ပြတိုက်ထဲမှာ အနုမြူဗုံးချတုန်းက ဘယ်လိုခံခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာ လူရုပ်တုတွေနဲ့ ပြထားတာ အတော် တုန်လှုပ်စရာကောင်းတယ်။ ဒါ တစ်နေ့ဖြစ်ကို ဖြစ်သင့်တယ်။
November 24, 2012 at 2:50pm · Like · 1
Aungmyint Ko ကမ္ဘောဒီးယားက Tuol Sleng Genocide Museum ရောက်ဖူးတယ်။ နှိပ်စက်ခံရတဲ့လူဦးရေများတယ်၊ မပ လောက်ထိပယ်ပယ်နယ်နယ် ရက်စက်ထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ Tourist attraction တခုဖြစ်လာခဲ့ရင် တရားခံတွေကို ခုံရုံးမြန်မြန်တင်နှိုင်လိမ့်မယ်။
November 24, 2012 at 7:44pm · Like
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 8:18 PM